Caymiska Medicaid iyo Naafonimada | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Hamm … waxay u egtahay il-mariskaagu (browser) inuu duugoobay.
Aan cusboonaysiinno il-mariskaaga si aad ugu raaxaysato mahadhada degdeg badan, ee degelka aadka u sugan.
U gudub tusmada ugu weyn
Luuqadda Degelka: Luuqadda hadda la doortay: Ingiriisi (en)
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Qaybta Raadinta Xir Qaybta Raadinta
Liiska Ugu Weyn
Ku Laabo Liiska Ugu Weyn
Majaraha Ugu Weyn
Hel qorshaha aad raadinayso maanta Context link
Baar qorsheyaasha adoo adeegsanaya baaqa cinwaanka Context link
Hel Qorsheyaasha Hel Qorsheyaasha
Gali koodhka baaqa cinwaanka oo ka kooban 5 lambar. Context link
Ma u qalantaa Medicaid iyo Medicare Context link
Wax ka ogow Qorshayaasha Labada Caymis ee Loo Qalmo. Context link
Dooro gobolkaaga Context link
Macluumaad si loo caddeeyo dooqyada qorshaha caafimaadka ee dadka haysta Medicaid iyo Medicare.
Wax ka ogow macaashyada labada caymis ee caafimaad, iyo sida loo qaabeeyay si loo caawiyo dadka leh Medicaid iyo Medicare.
Adiga ama qof aad taqaan ma leedihiin Medicaid iyo Medicare? Ogow sida la isugu diiwaangeliyo laba qorshe caafimaad.
Maxay qaadataa si aad ugu qalanto labada caymis ee caafimaad? Waa kuwan qaar ka mid ah dhigaalada loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare.
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo Context link
Qorsheyaasha kharashka jaban ama wax kharash ku bixin
Qorsheyaasha baahiyaha gaarka ah ee labada caymis ee loo qalmo
Qorsheyaasha siinaya caymis gaar ah dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba
Tusmada Ugu Weyn
Xarunta Agabka Context link
Medicaid iyo Medicare iyo naafonimada
Booqo Xaruntayada Dhigaalada COVID-19 si aad u ogaato sida loo helo baaritaanno lacag la'aan ah, loo helo xarumaha baaritaanka, wax badan looga ogaado caymiska iyo wax badan
La Soo Geliyay: Luulyo 30, 2021
Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Context link Luulyo 30, 2021
Ku wadaag boggan iimayl ahaan
Dhammaan goobaha waa loo baahan yahay
Iimaylka Laga Dirayo
Iimaylka Loo Dirayo
Waa maxay Medicaid yaase u-qalma?
Medicaid waa barnaamij ay leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolka oo siiya caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalmaan. Dadka u-qalma Medicaid waxaa ka mid ah:
Haweenka uurka leh ee dakhligoodu hooseeyo
Carruurta ka soo jeedo qoysaska danyarta ah
Carruurta ku jirta daryeelka korrinta
Dadka qaba naafonimada
Waayeelka dakhligoodu hooseeyo
Waalidiinta ama daryeelayaasha dakhligoodu hooseeyo
Barnaamijyada Medicaid waa mid ay dawladdu maamusho. Sidaas awgeed goboladu waxay dooran karaan inay Medicaid siiyaan dad badan, sida shakhsiyaadka dakhligoodu hooseeyo ee laga yaabo ama dhici karto inaysan carruur lahayn.
Hel hagahaaga qorshaha laba geesoodka ah oo bilaash ah
Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah oo ku jira hal, hage oo habboon.
Codso hagaha Context link
Meelaha bannaan oo dhan waa loo baahan yahay.
Gobolka* Xulo Gobolka Alabama Alaska American Samoa Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Federated States of Micronesia Florida Georgia Guam Hawai‘i Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Marshall Islands Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Northern Mariana Islands Ohio Oklahoma Oregon Palau Pennsylvania Puerto Rico Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virgin Islands Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Cinwaanka Iimaylka* example@email.net
Codsigaaga si guul leh ayaa loo gudbiyay
Mahadsanid, Hagehaagii waxaa lagu diri doonaa email-ka hada dhow lagu siiyay.
Ka warran haddii aan qabo naafonimo?
Dadka qaba naafonimada ama xaaladaha daba-dheeraada oo dakhligoodu hooseeyo waxay u-qalmaan Medicaid. Gobolada oo dhan ayaa sidoo kale siiya macaashyada Medicaid ee waayeelka, indhoolaha iyo naafada (ABD). ABD Medicaid waxaa loogu talagalay dadka waaweyn dad'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn ama qof kasta oo qaba naafonimo sida ku cad Sugnaanta Bulshada. Balse sidoo kale waa inaad buuxiso shuruudaha u-qalmitaanka dhaqaale ee ka jira gobolkaaga.
Haddii aad u-qalanto Medicaid ama Medicare waxay ku xiran tahay nooca macaashyada naafonimada ee aad qaadanayso.
Haddii aad qabto naafonimada Dakhliga Sugan ee Kabbista ah (SSI):
Waxaad u-qalmi doontaa caymiska Medicaid. Gobolo badan, waxaad si toos ah uga heli doontaa Medicaid. Balse gobolada kale, waxaad u baahan doontaa inaad isku diiwaangeliso Medicaid.
Haddii aad qaadato Dakhliga Naafonimada ee Sugnaanta Bulshada (SSDI):
Waxaad u-qalmi doontaa Medicare.
In ka badan 10 malaayiin qof ayaa u-qalma Medicaid iyadoo lagu salaynayo naafonimada Context link
MACPAC (Medicaid iyo CHIP Payment iyo Access Commission)
Waa maxay shuruudaha loogu qalmo naafo ahaan?
Dhib ma lahan haddii aad haysato SSI, SSDI, Medicaid, ABD Medicaid ama Medicare, shuruudaha caafimaadka waa isku mid. Marka hore, waa inaad buuxisaa shuruudaha naafanimada ee aan caafimaadka ahayn. Kuwaan waxay inta badan ku salaysan yihiin taariikhdaada shaqo iyo canshuuraha sugnaanta bulshada ee aad bixisay. Kadib, macaashka naafonimada ee billaha ah ayaa la bixiyaa haddii xaaladda caafimaad la filayo inay jiri doonto ugu yaraan 1 sano ama ay sababyso dhimasho.
Noocyada kala duwan ee xaaladaha caafimaad ee loogu qalmo naafo ahaan ee dadka waaweyn ee ka weyn da'da 18 jir ayaa ku qoran jaantuska hoose. Ogow in jaantuska inuu muujinayo liis guud. Kama mid ahan xaalad kasta ay dadka waaweyn ugu qalmi karaan naafonimada sugnaanta bulshada. Si aad u hesho liiska buuxa ee shuruudaha u-qalmitaanka booqo Mareegta Maamulka Sugnaanta Bulshada (SSA).Waxaa sidoo kale jira liiska caruurnimada oo gooni ah kaasoo muujinaya cilladaha carruurta qabta naafonimada.
Ugu Qalmida Cilad Caafimaad
Nidaamka muruqaha iyo lafaha (murqaha, lafaha iyo kala-goysyada)
Dhibaatooyinka ay ka mid yihiin daciifnimada murqaha, dhaqdhaqaaqa xaddidan iyo kala-bixin la'aanta jirka ama kala-bixinta jirka ee gaabiska ah
Dareennada gaarka ah iyo hadalka
Indho-beelka xaddidaya inaad wax u aragto si faahfaahsan, akhrinta ama wax qooraansato
Neefsashada oo adkaata, sida COPD, boronkiitada raagta iyo neef-xiranka sambabka, neefta iyo xab ku dhalashada sambabada
Habdhiska wadnaha iyo xiddidada wadnaha (wadnaha iyo xididdada dhiigga)
Cilladaha ka hortagaya in wadnaha ama habka wareegga dhiigga (halbowlayaasha, xididdada waaweyn iyo xididdada dhiigga) ay si habboon u shaqeeyaan.
Dhibaatooyinka dheefshiidka, oo ay ku jiraan beerka oo aan shaqaynayn, cudurka bararka mindhicirka, calool-xanuunka yar, iyo nafaqo-darrada
Cilladaha ka dhasha cudurka kelyaha ee raaga (CKD)
Dhibaatooyinka aan kansarka ahayn ee wehliya korritaanka iyo shaqaynta unugyada dhiigga ee cad iyo cas iyo xinjirowga dhiigga
Dhibaatooyinka maqaarka, oo ay ku jiraan caabuqyada joogtada ah ee maqaarka ama xuubabka duufka, cudurka maqaarka iyo gubashada
Isku dheelitirnaan la'aanta (hormoonnada) qanjirada.
Xaaladaha caafimaad ee keena in qanjirada jirka ay soo saaraan hormoon gaar ah oo aad u badan (hyperfunction) ama aad u yar (hypofunction)
Cilladaha lagu dhasho (ciladaha dhalashada) ee saameeya nidaamyada jirka oo badan
Cilladaha Daahida korriinka jirka iyo caqliga (Down syndrome) iyo cilladaha kale ee dhalashada, oo ay ku jiraan cudurka Tay-Sachs, phenylketonuria (PKU) iyo cilladda khamriga ee uurjiifka
Neerfaha (maskaxda iyo habdhiska dareenka)
Xaaladaha xaddidaya shaqada jirka iyo maskaxda, sida qallalka, ALS, miyir-beelka iyo bilawga hore ee Jirrada Xusuus La’aanta (Alzheimers)
Waxay daboolaan cudurro maskaxeed oo kala duwan, oo ay ku jiraan iskiitsofiriiniya, niyad-jabka, xanuunka laba-cirifoodka iyo cilladaha la xiriira, OCD, ootisamka, cilladaha cunto xumida iyo cilladaha walbahaarka iyo walwalka laxiriira
Dhammaan noocyada kansarka marka laga reebo kansarrada qaarkood ee la xiriira caabuqa dhima difaaca jirka (HIV).
Habdhiska difaaca jirka
Cilladaha saameeya habdhiska difaaca jirka, oo ay ku jiraan cudurrada lafo-beelka, cilladaha unugyada jirka isku xira iyo caabuqa dhima difaaca jirka (HIV)
Ka warran haddii aad ka yar tahay da'da 65 jir oo aad qabto naafonimo?
Dadka da'doodu ka yar tahay 65 jir ee qaba naafonimada ayaa si toos ah ugu qalma inay helaan Medicare (Part A iyo B) kadib markay ka helaan macaashka Sugnaanta Bulshada ilaa 24 bilood Haddii aad sidoo kale ugu qalanto Medicaid ama Medicaid naafonimo, barnaamijka Medicaid ee ka jira gobolkaaga ayaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo bixinta kharashaadka iyo adeegyada Medicare aysan daboolin. Adeeg kasta oo ay daboolaan Medicare iyo Medicaid labaduba (sida booqashooyinka dhakhtarka, daryeelka isbitaalka, daryeelka guriga iyo daryeelka xarunta kalkaalinta xirfadeed), Medicare ayaa lacagta bixin doona marka hore. Medicaid waxaa sidoo kale laga yaabaa inay bixiso kharashaadka ama adeegyada dheeraadka ah, balse waa kadib marka la isticmaalo saamiga Medicare.
Waa maxay u-qalma laba caymis ama caymiska laba geesoodka ah ee dadka qabo baahiyaha gaarka ah?
In ka badan 10 milyan oo qof ayaa u-qalma Medicaid iyadoo lagu salaynayo naafonimada.1 Waxaa sidoo kale jira in ka badan 12 malaayiin qof oo u-qalma Medicare iyo Medicaid labadauba.2 Dadkaan waxaa loo yaqaanaa “dadka u-qalma labada caymis” sababtoo ah waxay u-qalmaan labada caymis ee Medicare iyo Medicaid. Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ayaa bixiya macaashyo ka badan kuwa Original Medicare. Balse arrintu waxay tahay, dad badan oo u-qalmi kara Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ma oga inay jiraan qorshayaashaan.
Waa maxay Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah?
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxaa loogu talagalay dadka u baahan waxoogaa caawimo dheeraad ah. Taasi waxaa sabab u ah dakhliga, naafonimada, da'da iyo/ama xaaladaha caafimaadka. Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waa nooc gaar ah oo ka mid ah Qorshaha Medicare Advantage. Waxaa ku jira wax kasta oo aad ka hesho Original Medicare, waxaa intaas dheer caymiska daawada dhakhtarku qoro iyo macaashyo kale oo badan oo siyaado ah. Waxaadna ku heli kartaa wax kasta wax ka hooseeya $0 carbuunta qorshaha.
Sida la isugu diiwaangeliyo Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah
Si aad u ogaato inaad u-qalanto Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah, akhri maqaalkan. Ama isticmaal sanduuqa raadinta hoose si aad u hesho qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ee laga heli karo aaggaaga.
1 MACPAC (Medicaid iyo CHIP Payment iyo Access Commission)
2 Bogga falanqaynta ee CMS ee Xafiiska Isuduwidda Medicare-Medicaid
Ogow qorshayaasha UnitedHealthcare ee ka jira aaggaaga.
Qorshaha labada caymis ee loo qalmo ama macaashyada qorshaha Medicaid way isbeddeli karaan iyadoo ku xiran halka aad ku nooshahay. Context link Ku raadi koodhka Cinwaankaaga (Zip Code) si aad u hesho qorshaha saxda ah si loo daboolo baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga. Context link
Xarunta dhigaalka Context link
Qorshaha caafimaadka ee laba-geesoodka ah ayaa kaa caawin kara inaad ku iibsato badeecooyinka iyo raashiinka OTC si lacag la'aan ah
Caymiska ilkaha wuxuu siiyaa dadka haysta Medicaid iyo Medicare wax badan oo ay ku farxaan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya qorshaha HMO iyo PPO Context link
Waa maxay diiwaanka daawada oo sidee ayuu u shaqeeyaa? Context link
Waa maxay caafimaadka habdhaqanka Context link
Eeg dhammaan qodobbada Macaashyada Context link
Tallooyinka isgaarsiineed ee loogu talagalay daryeel bixiyeyaasha Xiriiriyaha macnaha guud
Tallooyinka kaa caawinaaya daryeel bixiyeyaasha balamaha caafimaadka
10 calaamadaha inay tahay waqtigii la soo geli lahaa caawinaada daryeelbixinta Context link
Sida looga caawiyo qof inuu cunno cunto caafimaad leh - Talooyinka loogu talagalay daryeelbixiyeyaasha Context link
Faa'idada iyo khasaaraha wax daryeelida
Daawo dhammaan maqaallada Daryeel bixiyaha Context link
Yaa xaq u yeelan kara qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ama Qorshaha Caafimaadka Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah Context link
Waa maxay ballaarinta Medicaid?
Isbarbardhiga Medicaid iyo Medicare: Waad haysan kartaa labaduba.
Maxaad ku dooran UnitedHealthcare si aad u hesho qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo Context link
Goorma ayaad isku diiwaangelin kartaa qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah haddii aad haysato Medicaid iyo Medicare Context link
Waa maxay 4 qaybaha uu ka kooban yahay Medicare Context link
Sida loo helo dhakhtarka kuugu habboon markaad haysato Medicaid iyo Medicare
Qorshayaasha Dadka Qaba Naafonimada ee Medicare Maxay yihiin oo sidee ayay u shaqeeyaan Context link
Eeg qodobbada Diiwaangelinta oo dhan Context link
Qaamuuska ereyada daryeelka caafimaadka Context link
Eeg Su’aalaha Inta badan La Isweydiiyo (FAQs)
Weli su'aal miyaad qabtaa Context link
Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino Context link
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii.
Macluumaadka afeefta Context link
(ku dhex wad bogoskan si aad u aragto)
Ma waxaad raadinaysaa mareegta dawladda dhexe ee Medicaid? Halkan ka eeg Medicaid.gov.
UnitedHealthcare Dual Complete Plans Context link
Qorsheyaasha waxaa la doolaa iyadoo loo sii marayo Shirkadda Caymiska UnitedHealthcare ama mid ka mid ah shirkadaheeda xiriirka la leh, Hay'adda Medicare Advantage ee haysata qandaraaska Medicare iyo qandaraaska kula jirto Barnaamijka Medicaid ee Gobolka. Iska diiwaangelinta qorshaha waxay ku xiran tahay heshiiska cusboonaysiinta qorshaha ee Medicare. Qorshahan waxaa heli kara qof kasta oo haysta Medical Assistance ee laga helo Gobolka iyo Medicare labaduba. Macluumaadkani kama bixinayo sharraxaad dhammeystiran macaashyada. Wac 1-800-905-8671 TTY 711 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Xaddidaado, wada-bixinno, iyo xannibaado ayaa lagu dabaqi karaa. Macaashyada, khidmadaha iyo/ama wadabixinnada/qaybsiga caymiska ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan markay tahay 1-da Janaayo ee sannad kasta.
Afeefta Nurseline Context link
Adeegani waa inaan loo isticmaalin baahiyada gurmadka ama daryeelka ee degdegga ah. Marka ay jirto xaalad degdega ah, wac 911 ama tag qolka gurmadka ee kuugu dhow. Macluumaadka lagu bixiyay adeegan waxaa laga leeyahay ujeedooyin waxbixin oo keliya. Kalkaaliyeyaashu ma sheegi karaan dhibaatooyinka ama kuma talin karaan daaweyn mana u noqon beddel daryeelka dhakhtarkaaga. Macluumaadkaaga caafimaad waxaa loo keydiyaa si qarsoodi ah oo waafaqsan sharciga. Adeegga ma ahan barnaamij caymis waana la joojin karaa waqti kasta.
UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio (Medicare-Medicaid Plan) waa qorshe caafimaad oo qandaraas la leh Medicare iyo Medicaid Ohio labaduba si ay u siiyaan macaashyada labada barnaamij dadka ka diiwaangashan. Haddii aad wax dhib ah kala kulanto akhrinta ama fahamka tan ama macluumaadka kale ee UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio (Medicare-Medicaid Plan), fadlan kala xiriir Adeegyadeena Member Services lambarka 1-844-445-8328 (TTY 711) laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 8 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha (mashiinka codka ayaa diyaar ah 24 saac maalintii/7 berri isbuucii) si aad u hesho kaalmo lacag la'aan ah.
UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan) waa qorshe caafimaad oo qandraas la leh Medicare iyo Texas Medicaid Ohio labaduba si ay u siiyaan macaashyada labada barnaamij dadka ka diiwaangashan.
UnitedHealthcare Connected® oo loogu tala galay One Care (Qorshaha Medicaid - Medicare) Context link
UnitedHealthcare Connected® oo loogu tala galay One Care (Qorshaha Medicaid-Medicare) waa qorshe caafimaad oo qandaraas siiyay Medicare iyo MassHealth (Medicaid) labaduba si manaafacaad ay uga helaan dadka iska diiwaan galiyay labada barnaamijba. UnitedHealthcare Connected® for One Care (Medicare-Medicaid Plan) es un plan de salud que tiene un contrato tanto con Medicare como con el programa MassHealth (Medicaid) para proporcionar los beneficios de ambos programas a sus miembros. Context link
DIGNIIN: Haddii aad ku hadasho luuqad kale, adeegyada kaalmada luqadeed, oo lacag la'aan ah, ayaad heli kartaa. Kawac Xarunta Latacaamulka Xubnaha 1-866-633-4454, TTY 711, 8 am - 8 pm, waqtiga maxalliga ah, 7 maalmood todobaadkii. Context link Wicitaanka waa bilaash.
Afeefta macaashka UnitedHealthcare Connected Context link
Kani ma ahan liis dhammeystiran. Macluumaadka macaashka waa qoraal kooban, ma ahan sharraxaadda dhammeystiran ee macaashyada. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah la xiriira qorshaha ama akhri Buug-gacmeedka Xubinta. Xaddidaado, wada-bixinno, iyo xannibaado ayaa lagu dabaqi karaa. Wixii macluumad dheeraad ah, wac Adeegyada Xubnaha ee ku xiran UnitedHealthcare ama aqri Buugyaraha Xubnaha ee UnitedHealthcare Connected. Context link Manaafacaadka iyo/ama qarashka caymiska ee go’an waxaa laga yaabaa inay wax iska baddalaan Janaayo 1 sannad walba. Context link
Waxaad ku heli kartaa dukumentigan qaabab kale oo bilaash ah, sida daabacaadda ballaaran, qoraalka indhooleyaasha, ama maqal. Wac 1-866-441-0395, TTY 711, 8 am - 8 pm., waqtiga maxalliga ah, Isniinta-Jimcaha (ayadoo cajal uu ku xiran yahay oo wax lagu duubi karo 24 saacadood maalintii/7 maalmood asbuucii). Context link Wacitaanku waa lacag la’aan. Waxaad soo wici kartaa Xarunta Latacaamulka Xubnaha waxaadna naga codsan kartaa inaan ku xusno nidaamkeena inaad jeceshahay inaad agabka ku hesho Af-Soomaali, daabacaad ballaaran, farta indhooleyaasha, ama maqal hadda iyo mustaqbalka. Context link
Khadka Luqadda ayay heli karaan dhammaan bixiyeyaasha ku jira shabakadda.
Puede obtener este documento de forma gratuita en otros formatos, como letra de imprenta grande, braille o audio. Llame al 1-877-542-9236, TTY 711, de 8am. a 8pm, hora local, de lunes a viernes (correo de voz disponible las 24 horas del día,/los 7 días de la semana). Context link La llamada es gratuita.
Suurtagalnimada in la joojiyo qandaraaska
Sida loo soo afjaro xubinimada qorshaheena Context link
Maadaama aad wali u qalanto Medicare iyo MassHealth, waad ka bixi kartaa UnitedHealthcare Connected oo aad aadi kartaa One Care adigoon lumin manaafacaadkii aad ka heli jirtay Medicare iyo MassHealth. Context link Haddii da’daadu weyntahay 65 aadna go’aansato inaad ka baxdo One Care, ma awoodi doontid inaad iska diiwaangaliso qorshaha One Care hadhoow dambe. Context link Haddii aad u malayso inaad dooneyso in aad soo afjarto xubinimada qorshaheena, waxaa jira siyaabo tiro yar oo aad ku heli karto xog intii hore ka badan oo ku saabsan waxa dhici doona, waxaadna wali heli kartaa adeegyada Medicare iyo MassHealth. Context link
Ka wac Adeegyada Macaamiisha ee MassHealth 1-800-841-2900, Isniin – Jimce, 8 am – 5 pm, isticmaaleyaasha TTY (dadka dhagooleyaash ah, kuwa dhaga jiga, ama kuwa aan hadli karin) waxay soo wici karaan 1-800-497-4648. Context link
Ka wac Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 saacadood maalintii, 7 maalmood asbuucii. Context link Isticmaaleyaasha TTY (dadka dhaga jiga ama hadalku ku adag yahay) waxay soo wici karaan 1-877-486-2048. Context link
Kala xiriir la-taliyaha SHINE 1-800-243-4636. Context link Isticmaaleyaasha TTY (dadka dhagooleyaash ah, kuwa dhaga jiga, ama kuwa aan hadli karin) waxay soo wici karaan 1-800-439-2370. Context link
Haddii aad go’aansato inaad soo afjarto xubinimadaada, wac MassHealth ama Medicare una sheeg inaad dooneyso inaad ka baxdo UnitedHealthcare Connected-ka loogu tala galay One Care. Context link
Ka wac Adeegyada Macaamiisha ee MassHealth 1-800-841-2900, Isniin – Jimce, 8 am – 5 pm isticmaaleyaasha TTY (dadka dhagooleyaash ah, kuwa dhaga jiga, ama kuwa aan hadli karin) waxay soo wici karaan 1-800-497-4648; AMA Context link
Usoo dir Foomka Go’aanka Isdiiwaangalinta MassHealth. Context link Waxaad ka heli kartaa foomka www.mass.gov/one-care ama adigoo soo wacaya xogta xiriirka ee qorshaha haddii aad u baahan tahay inaan kuu soo dirno; AMA Context link
Mararka qaarkood markii Adeega Macaamiisha ee MassHealth la xiro, kasoo wac Medicare 1-800-MEDICARE (1- 800-633-4227), 24 saacadood maalintii, 7 maalmood asbuucii. Context link Isticmaaleyaasha TTY (dadka dhaga jiga ama hadalku ku adag yahay) waa inay soo wacaan 1-877-486-2048. Context link Markii aad soo wacdo 1-800-MEDICARE, waxaad sidoo kale isu diiwaangalin kartaa qorshe kale oo caafimaadka Medicare ah ama qorshe daawo. Context link Xog dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka adeegyadaada Medicare markii aad ka baxayso qorshaheena waxay kujirtaa jaantuska kuyaalla bogga 188 ee Buugyaraha Xubnaha/Caddeynta Caymiska. Context link
Caymiskaaga UnitedHealthcare Connected ee loogu tala galay One Care waxaa uu dhammaan doonaa maalinta ugu dambaysa bisha aanu helno codsigaaga. Context link
Xaaladaha kale ee markii xubinimadaadu dhammaato Context link
Kuwaani waa xaalado markii MassHealth ama Medicare ay qasab tahay inay soo afjaraan xubinimadaada qorshaheena: Context link
Haddii waqti uu soo dhex galo Medicare-kaaga Qeybta A iyo ceymiskaaga Qeybta B. Context link
Haddii wax intaan ka badan aadan u qalmin MassHealth. Context link Qorshaheena waxaa loogu tala galay dadka u qalma labadaba Medicare iyo MassHealth. Context link
Haddii aad ku biirto MassHealth-ka Guriga iyo barnaamijka Kadhaafidda Adeegyada Bulshada Kusalaysan (HCBS) Context link
Haddii aad ka guurto goobta adeegeena. Context link
Haddii aad ka guurto Xarunta Daryeelka ee Dhexda Kujirta ee ay maamusho Massachusetts Waaxda Adeegyada Horumarinta. Context link
Haddii aad gasho jeel ama xabsi dambi aad gashay dartii. Context link
Haddii aadan ahayn muwaadin Mareykan ah ama si sharci ah aadan ku joogin Mareykanka. – Waa qasab inaad tahay muwaadin Mareykan ah ama qof si sharci ah kujooga Mareykanka si aad xubin uga noqoto qorshaheena. – Xarumaha Adeegyada Medicare & Medicaid waxay nasoo ogeysiin doonaan haddii aadan u qalmi inaad xubin sii ahaato ayadoo lagu salaynaayo arrinkaan. – Waxaa qasab nagu ah inaan diiwaanka kaa saarno haddii aadan buuxin shardigaan. Context link
Haddii aad leedahay ama aad hesho caymis kale oo guud oo loogu tala galay dawooyinka dhaqtari soo qoro ama daryeel caafimaad. Context link UnitedHealthcare Connected loogu tala galay One Care BUUGYARAHA XUBNAHA 191 Cutubka 10: Context link Soo afjarida xubinimadaada UnitedHealthcare Connected loogu tala galay One Care Haddii aad su’aalo qabto, fadlan ka wac UnitedHealthcare Connected loogu tala galay One Care 1-866-633-4454, TTY 711, 8 am – 8 pm waqtiga maxalliga ah, 7 maalmood asbuucii. Context link Wicitaanka waa bilaash. Si aad u hesho xog dheeraad ah, booqowww.UHCCommunityPlan.com. Context link
Haddii aad qof kale u ogolaato inuu isticmaalo Kaarkaaga Aqoonsiga Xubinimada si uu daryeel u helo. Context link
Haddii xubinimadaada xilligaan ay dhammaato, Medicare waxaa uu kadalbi karaa Baaraha Guud inuu soo baaro kiiskaaga, MassHealth isna wuxuu kadalbi karaa Laanta Baaritaannada Gaarka ah inay soo baarto kiiskaaga. Context link
Waxaan sidoo kale kaa dalbi karnaa inaad kabaxdo qorshaheena haddii aad si joogto ah ugu dhaqanto si carqaladeyn ah oo aanu daryeel kugu siin karin ama aanaan daryeel kusiin karin xubnaha kale ee qorshaheena. Context link Waxaan un kugu qasbi karnaa inaad ka baxdo haddii aan ogolaansho ka helno marka hore Medicare iyo MassHealth. Context link
Afeefta macaashka UnitedHealthcare Connected® Context link
Kani ma ahan liis dhammeystiran. Macluumaadka macaashka waa qoraal kooban, ma ahan sharraxaadda dhammeystiran ee macaashyada. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah la xiriira qorshaha ama akhri Buug-gacmeedka Xubinta. Xaddidaado, wada-bixinno, iyo xannibaado ayaa lagu dabaqi karaa. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, wac UnitedHealthcare Connected® Member Services ama akhri buug-gacmeedka xubinta ee UnitedHealthcare Connected®. Macaashyada, Liiska Daawooyinka La Daboolay, farmashiyaha iyo shabakadaha bixiyeyaasha iyo/ama wada-bixinnada ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan waqti ka waqti sannadka oo dhan iyo markay tahay 1-da Janaayo ee sannad kasta.
Waxaad ku heli kartaa dukumentigan qaabab kale oo bilaash ah, sida daabacaadda ballaaran, qoraalka indhooleyaasha, ama maqal. Wac 1-877-542-9236, TTY 711, 8 subaxnimo - 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta-Jimcaha (mashiinta coda ayaa la heli karaa 24 saac maalintii/7 berri isbuucii). Wicitaanka waa bilaash.
Waxaad soo wici kartaa Member Services waxaadna naga codsan kartaa inaan ku xusno nidaamkeena inaad jeceshahay inaad agabka ku hesho Af-Soomaali, daabacaad ballaaran, farta indhooleyaasha, ama maqal hadda iyo mustaqbalka.
UnitedHealthcare SCO waa qorshaha Daryeelka Isku Dubaridan ee la leh qandaraas Medicare iyo qandaraas kula jira barnaamijka Common Wealth Massachusetts of Medicaid. Iska diiwaangelinta qorshaha waxay ku xiran tahay heshiiska cusboonaysiinta qorshaha ee Medicare. Qorshahan waa barnaamij isxilqaan ah uu heli karo qof kasta oo jira 65 iyo ka weyn oo u-qalma MassHealth Standard iyo Original Medicare. Haddii aad leedahay MassHealth Standard, balse aadan u-qalmin Original Medicare, waxaa laga yaabaa inaad weli u-qalanto inaad iska diiwaangeliso qorshaheena MassHealth Senior Care Option oo aad hesho macaashyadaada MassHealth oo dhan adoo u maraya barnaamijkeena SCO.
Jiritaanka afeef aan Ingiriisi ku qorneyn Context link
DIGNIIN: Haddii aad ku hadasho luuqad kale, adeegyada kaalmada luqadeed, oo lacag la'aan ah, ayaad heli kartaa. Wac 1-800-905-8671 TTY 711.
Afeefta qiimeynta xidigeed Context link
Sannad kasta, Medicare waxay qiimaysaa qorsheyaasha iyadoo ku salaysa nidaamka qiimeynta 5-Xiddig. Context link
Liistada rijeetada, shabakadda farmashi iyo shabakadda bixiyaha way isbeddeli karaan waqti kasta. Waxaad heli doontaa ogeysiis markay habboon tahay.
UnitedHealthcare Connected® waxay hayaan Qaab Daryeel ay ansixiyeen Guddiga Qaran ee Xaqiijinta Tayada (NCQA) si ay u qabtaan Qorshaha Baahiyaha Gaarka ah (SNP) ilaa 2017 iyadoo lagu saleynayo dib-u-eegista Qaabka Daryeelka ee UnitedHealthcare Connected.
Macluumaadka bixiyaha ee muhiimka ah Context link
Go'aanka Adigaa Leh.
Waxaan ku siin doonaa macluumaad kaa caawin doona inaad gaarto go'aano wargal ah, sida aqoonsashada dhakhaatiirta iyo xirfadleyaasha daryeelka caafimaadka. Macluumaadkan, si kastaba ha ahaatee, ma ahan mid ayidaya dhakhtar gaar ah ama xirfadlaha daryeelka caafimaadka ee ku habboon baahidaada.
Bixiyeyaasha la heli karo iyadoo loo marayo codsigan ma ahan inay xaqiiqdii uga turjumayaan si buuxda shabakada UnitedHealthcare ee bixiyeyaasha qandaraaska lagula jiro. Waxaa laga yaabaa inay jiraan bixiyeyaal ama takhasusleyaal gaar ah oo aan lagu darin codsigan oo qayb ka ah shabakadeena. Haddii aadan helin bixiyaha aad raadinayso, waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa bixiyaha si aad u xaqiijiso xaaladda kaqaybgalka ee shabakadda UnitedHealthcare, ama kala xiriir Mamber Services lambarka bilaashka ah ee ku qoran kaarkaaga aqoonsiga UnitedHealthcare. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa, kahor inta aadan la kulmin dhakhtar kasta, oo ay ku jiraan takhasusleyaal kasta, inaad wacdo xafiiska dhakhtarka si aad u xaqiijiso xaaladda kaqaybgalka iyo helitaanka.
Qaar kamid ah shabakadda bixiyeyaasha ayaa laga yaabaa in lagu daray ama laga saaray shabakadeena kadib markii diiwaankan la cusbooneysiiyay. Ma dammaanad qaadi karno in bixiye kasta weli aqbalayo xubno cusub.
Bixiyeyaasha shabakadda ka baxsan/qandaraaska haysan kuma qasbana inay daaweeyaan xubnaha ku jira qorshaha UnitedHealthcare, marka laga reebo xaaladaha gurmadka ah. Fadlan soo wac lambarkeena adeegga macmiilka ama ka eeg Caddayntaada Caymis wixii macluumaad dheeraad ah, oo ay ku jiraan kharash wadaagga khuseeya adeegyada shabakadda ka baxsan.
Ogeysiiska Xeerka Naafada Mareykanka Context link
Sida waafaqsan shuruudaha Xeerka Naafada ee Dawladda Dhexe Maraykanka 1990 iyo Qeybta 504 Xeerka Baxnaaninta 1973 ("ADA"), Shirkadda Caymiska UnitedHealthcare waxay bixisa adeegyada la daboolay oo buuxa oo loo siman yahay mana takooraan shakhsiyaadka u-qalma ee naafada ah iyadoo lagu salaynayo naafanimada markay bixinayaan adeegyadooda, barnaamijyadooda, ama waxqabadooda.
Bixiyeyaasha shabakadda ayaa idin ka caawin doona adiga iyo xubnaha qoyskaaga ee caymiska leh inaad heshaan daryeelka aad u baahan tihiin. Helitaanka dhakhaatiirta takhasuska leh waxaa isku dubaridi kara dhakhtarkaaga daryeelka aasaasiga ah.
Codsiyada diiwaanka waraaqaha Context link
Nuqullada warqadaha ee ku jira diiwaanka bixiyaha shabakadda waxay ku heli karaan xubnaha si bilaash ah iyagoo wacaya lambarka adeegga macmiilka ee ku yaala gadaasha kaarka aqoonsiga. Dadka aan xubinta ka ahayn waxay natiijooyinka ka soo dejisan karaan oo ka daabacan karaan diiwaanka onlaynka ah.
Macluumaadka khaldan Context link
Si aad uga warbixiso macluumaadka khaldan, u dir iimayl provider_directory_invalid_issues@uhc.com. Bogoskan iimaylka waxaa loogu talagalay xubnaha si ay uga warbixiyaan khaladaadka suurtagalka ah ee macluumaadka qofka (cinwaanka, telefoonka, iwm.) ee ku jira hagaha diiwaanka onlaynka ah ama waraaqaha. Ka warbixinta arrimaha iyadoo loo marayo bogoskan boostada waxay keeni doontaa in la gaaro xafiiska bixiyaha si loo xaqiijiyo dhammaan xogta dadka ee ku jira diiwaanka, taasoo qaadan karta qiyaastii 30 maalmood. Shakhsiyaadka sidoo kale waxay soo sheegi karaan khaladaadka suurtagalka ah iyagoo adeegsanaya telefoonka. Xubnaha UnitedHealthcare waa inay wacaan lambarka ku yaala gadaasha kaarkooda aqoonsiga, dadka aan xubin ka hayn UnitedHealthcare waxay soo wici karaan 888-638-6613 TTY 711.
Ku Dhawaaqida Musiibo ama Xaalad Degdeg ah Context link
Haddii ay ku saamayso ku dhawaaqida musiibo ama xaalad degdega ah ee Madaxweynaha ama Guddoomiyaha Gobolka, ama oggeysiiska xaalad caafimaadka dadweynaha ee degdeg ah oo uu ku dhawaaqay Xoghayaha Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha, waxa jira taageero dheeraad ah oo gaar ah oo adiga diyaar kuu ah. Context link
Qaybta A, Qaybta B, iyo dheefaha qorshaha Qaybta C ee dheeraadka ah waa in lagu bixiyaa xarumo aan qandaraaska lahayn oo gaar ah (ogsoonow in dheefaha Qaybta A iyo Qaybta B ay tahay in laga helo xarumaha shahaadaysan ee Medicare); Context link
Meeshii ay ku habboon tahay, shuruudaha loogu talagalay gudbinta albaab-ilaaliyaha si buuxda ayaa looga dhaafay; Context link
Wadaagista kharashka shabakada ka baxsan ee qorshaha la ansixiyay ilaa qadarada wadaagista kharashka shabakada ayaa si ku meelgaar ah loo dhimay; iyo Context link
Shuruudaha oggeysiiska ee 30-ka maalin ah ee ku aadan xubnaha waa la dhaafay, ilaa inta dhammaan isbeddellada dheefta (sida dhimista wadaagista kharashka iyo oggolaanshaha ka dhaafitaanka) ee xubinta. Context link
Haddii CMS aysan bixin taariikhda dhammaadka ee loogu talagalay musiibada ama xaaladda degdegga ah, qorshooyinka ayaa dib u bilaabi doona maalmaha 30 shaqada ee caadiga ah ka dib ku dhawaaqista hore. Context link
Foomka Cabashada Medicare
Ogeysiisyada Takoorka La'aanta iyo Kaalmada Luqadeed
Loogu Talagalay Xirfadleyaasha Daryeelka Caafimaadka
Degelkan waxaa ku jira dukumeenti qaab PDF ah. PDF (Dukumenti Qaab La Qaadan Karo Leh) waxaa lagu eegi karaa Adobe Reader®. Haddi aadan horay ugu haysan barnaamijkan kombayutarkagauga soo dejiso si bilaash ah mareegta Adobe.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.18.2022 waqtiga 03:02 GALABNIMO CDT
© 2022 UnitedHealthcare Services, Inc. Dhammaan xuquuqaha way dhowrsan yihiin.
Fadlan xulo gobolkaaga.